पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका चन्द्रमा दाहिना, भारतले किन अझै ‘महाराज’ मान्छ ? - Dainik Nepal
पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका चन्द्रमा दाहिना, भारतले किन अझै ‘महाराज’ मान्छ ?
दैनिक नेपाल २०७५ कार्तिक २० गते १२:१७
उत्तर प्रदेश मुख्यमन्त्री योगी आदीत्यनाथको ट्वीटरबाट (फाइल तस्बिर)
काठमाडौं, २० कात्तिक । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह व्यवस्था परिवर्तनको कुनै पनि मौकाको खोजीमा छन् । त्यसैले बेलामौका उनले राजनीतिक विषयमा पनि बोल्ने गरेका छन् । तर यतिबेला उनका चन्द्रमा दाहिना भएको जस्तो देखिएको छ । भारतको गणतन्त्र दिवसका अवसरमा आगामी २६ जनवरीमा उनलाई सम्भावित प्रमुख अतिथिका रूपमा राखिएको छ । त्यसको खुुलासा भारतीय मिडियाले गरेपछि पूर्वराजाले कुटनीतिक चलखेल पनि व्यापक बढाएको बताइन्छ ।
केही महिनाअघि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा राजदूत मन्जिव सिंह पुरीले पूर्वराजालाई ‘महाराज’ भनी सम्बोधन गरेका थिए । त्यसमा नेपाली राजनीतिक दलहरूले टिप्पणी गरे पनि भारत सरकारको आधिकारीक प्रतिनिधि संस्थाले आफ्नो मान्यतालाई सच्याएन
गत महिनाको अन्तिम दिन उनलाई मुम्बईका विभिन्न हिन्दूवादी संस्थाले ‘नेपालका महाराज’ भनी सम्बोधन गरी ठूलो स्वागत सम्मान गरेको थियो । यसले भारतमा उनी नेपालमा जस्तै पूर्वराजा भनेर सम्बोधनमा छैनन् । उनको सचिवालय आफैंले पनि ‘पूर्व’मानेको राजालाई भारतले किन महाराज भनिरहेको छ ?
भारतले उनलाई महाराज मान्नुका कतिपय दलिल नेपालस्थित भारतीय दूतावासले गरेको कार्यक्रमको सम्बोधन, भारतका विभिन्न राज्यमा गरिएका स्वागत सत्कार तथा सम्मान र भारतीय संस्थापन पक्षले दिएको महत्वले पनि देखाउँछ ।
केही महिनाअघि काठमाडौंस्थित भारतीय दूतावासले जारी गरेको एउटा विज्ञप्तिमा राजदूत मन्जिव सिंह पुरीले पूर्वराजालाई ‘महाराज’ भनी सम्बोधन गरेका थिए । त्यसमा नेपाली राजनीतिक दलहरूले टिप्पणी गरे पनि भारत सरकारको आधिकारीक प्रतिनिधि संस्थाले आफ्नो मान्यतालाई सच्याएन ।
त्यतिमात्र होइन, गत बर्षको अन्त्यतिर भारतको उत्तर प्रदेशका मुुख्यमन्त्री योगी आदीत्यनाथले पनि ज्ञानेन्द्रलाई महाराजको हैसियतमा नै सत्कार गरेका थिए । उनले ट्वीट मार्फत तस्बिर सार्वजनिक गर्दै नेपालका महाराजको सम्मान गरेको जनाएका थिए । उनको सचिवालयले पनि ज्ञानेन्द्रलाई महाराजको संज्ञा दिएको थियो ।
२ सय ३७ बर्षको विरासत गुमाएपछि धोका पाएको बताउने पूर्वराजाले त्यसलाई निरन्तरता दिनका लागि भारतकै भरोसा गरेका छन् । औपचारिक रूपमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग उनको भेट भएको सतहमा नआए पनि अनौपचारिक रूपमा तीन पटक भेट भइसकेको भारतीय उच्च अधिकारीहरूले नै खुलासा गरिसकेका छन् ।
भारतीय जनता पार्टीको सत्ताले तय गरेको कुटनीतिक रणनीतिअनुुसारै नेपालमा उदाउन सकिने सोच बनाएका पूर्वराजाले हिन्दुत्व खतरामा परेको बारम्बार बताउँदै आएका छन् । यस्तो सन्देश भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीका खास सल्लाहकार सिद्धार्थ अम्बानीमार्फत पूर्वराजाले ‘पिएमओ इन्डिया’मा पुराएको पनि दाबी गरिन्छ ।
उक्त सन्देशलाई सकारात्मक लिएको सचिवालयका एक जना सञ्चारसहयोगी डा. फणि पाठकले भने, ‘मैले पनि सुनेको छु । पढेको छु । तर यस विषयमा तिहारपछि मात्र केही बुझ्ने कोशीश हुनेछ ।’
क्रिश्चियनको गतिविधि बढेपछि भाजपाका विभिन्न नेताहरुले नेपालमा हिन्दू राज्य र राजतन्त्र हुनुपर्छ भनिरहेका छन् । भारतीय जनता पार्टीका कतिपय नेता र उपाध्यक्षसम्मले काठमाडौंमा आएरै नेपालमा राजतन्त्रको खाँचो रहेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । त्यसपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र अझ भारततिर झुकाव राख्न थाले ।
भारतबाट नै पूर्वराजालाई प्रमुख अतिथि बनाउने विषयमा भएको सूचना प्रवाहबारे भने निर्मलनिवास सचिवलायले कुनै पनि प्रतिक्रिया दिइसकेको छैन । उक्त सन्देशलाई सकारात्मक लिएको सचिवालयका एक जना सञ्चारसहयोगी डा. फणि पाठकले भने तिहारपछि यस विषयमा बुझ्ने दैनिक नेपाललाई बताए । ‘मैले पनि सुनेको छु । पढेको छु । तर यस विषयमा तिहारपछि मात्र केही बुझ्ने कोशीश हुनेछ’, उनले भने,‘अफिसियल निम्तो आएको छ की छैन त्यसबारे पनि बुझ्न बाँकी छ ।’